Yakachipa CNC kutendeuka Isina Simbi fekitori nevatengesi | Ouzhan
Stainless simbi CNC kutendeuka kunogadzira-yakagadzirirwa chaiyo simbi isina simbi yekutendeuka zvikamu
Stainless simbi inewo zvinhu zvakaita saNi, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, uye Cu. Stainless simbi cnc kutendeuka zvikamu zvakanyanya kwazvo uye zvinoshandiswa zvakanyanya mukudya, kemikari, avhiyesheni uye kuvaka. Lathe kugadzira chikamu chemuchina wekugadzirisa. Lathe kugadzira inonyanya kushandisa yekushandura chishandiso kutenderedza chinotenderera workpiece. Drills, reamers, reamers, matepi, kufa uye knurling maturusi anogona zvakare kushandiswa pane iyo lathe yekuenderana inoenderana. Lathes dzinowanzotsigi- kushandiswa machine miseve, discs, maoko nezvimwe workpieces pamwe kutenderera hukawanika. Ndiwo akanyanya kushandiswa mhando yemuchina chishandiso kugadzirisa mune michina kugadzira uye kugadzirisa mafekitori.
Zvakanakira Ouzhan Stainless simbi yakachinja zvikamu
- Green uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, simbi isina chinhu inogona kuve 100% yakadzokororwa zvakare, haizokonzere kusvibisa kwezvakatipoteredza, uye inobatsira kusimudzira kwakasimba; Stainless simbi tsvina zvakare ine hukuru hwehupfumi.
- Chemical zvimiro
- Zvepanyama zvimiro: kupisa kupisa, kupisa kwakanyanya kupisa, yakaderera tembiricha kuramba uye kunyangwe Ultra-yakaderera tembiricha kuramba.
- Mechiniki zvivakwa: Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzesimbi isimbi, michina zvimiro zvakasiyana. Martensitic simbi isina simbi ine simba rakasimba uye kuomarara, uye inokodzera kugadzira zvikamu zvinodziya ngura uye zvinoda simba rakakura uye yakasimba yekupfeka kuramba, senge hydraulic turbine shafts uye simbi isina chinhu. Mapanga, simbi dzesimbi dzesimbi, nezvimwewo, austenitic simbi isina chinhu ine mapurasitiki akanaka, kwete simba rakakwira asi yakanakisa ngura kuramba pakati pesimbi dzesimbi. Iyo inokodzera nguva dzinoda chaizvo kuramba ngura asi yakaderera michini zvivakwa, senge makemikari zvinomera uye mafetiraiza zvirimwa. Zvishandiso zvemidziyo yesulfuric acid uye hydrochloric acid vagadziri, nezvimwewo, chokwadika, zvinogona zvakare kushandiswa mumaindasitiri emauto senge submarines. Ferritic simbi isina simbi ine zvine mwero michina zvimiro uye yakaderera simba, asi inopokana neiyo oxidation uye inokodzera akasiyana mafekitori emoto zvikamu.
- Maitiro ekuita: Austenitic simbi isina simbi ine yakanakisa maitiro maitiro. Nekuda kwepurasitiki yayo yakanaka, inogona kugadziridzwa kuita mahwendefa akasiyana siyana, machubhu uye mamwe ma profiles, ayo akakodzera kumanikidzwa kugadzirisa. Simbi isina chinhu yeMartensitic ine mashoma maitiro ekuita nekuda kwekuoma kwakanyanya.
OEM yakagadzirirwa simbi isina simbi yekushanduka sevhisi-China Shanghai CNC simbi isina simbi yekushandura zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yakakwira-chaiyo CNC kutendeuka simbi dzesimbi zvikamu zvine mutsigo uye zvakavimbika mhando zvinogona kugadziriswa. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakakwana kwesimbi isina simbi yekushandura michina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC-yakashandura simbi dzesimbi zvigadzirwa dzakapihwa zvakanyatso kusangana nemhando dzemhando uye dzinogona kushandiswa mune akasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa anokwikwidza mutengo masevhisi esimbi isina simbi CNC kutendeuka zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Kunyorera nzvimbo dzesimbi isina simbi yekutendeuka zvikamu:
Indasitiri yemotokari, mota, mabhazi, zvitima, mota dzepasi pevhu uye zvimwe zvikamu.
Misika mishanu ingangowanikwa yesimbi isina chinhu, inosanganisira indasitiri yemvura, indasitiri yekuvaka, indasitiri yekushandisa pamba, indasitiri yekuchengetedza, uye zvivakwa zveindasitiri.
Zvakanakira chesimbi isina tsvina kutendeuka masevhisi
- Yese chaiyo CNC yakashandura simbi dzesimbi zvigadzirwa zviri pasi peyakaomeswa mhando kuongororwa.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli kugadzira chaiyo simbi isina kutenderera zvikamu.
Pashure: Kukanda aruminiyamu chiwanikwa kufa kukanda
Zvadaro: Yakasarudzika Hot Hot Kuwedzeredza Ndokugadzira Zvikamu